Shil Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Duleedka Baladweyne | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shil Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Duleedka Baladweyne
Wararka aan ka heleyno duleedka Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in barqannimadii Maanta halkaas uu ka dhacay shil gaari oo khasaaro geystay.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in shilka uu ka dambeeyay, kadib markii gaari nooca Soomaalida NOHA uu rogmaday, xili uu ku socday xawaare dheereeya, waxaana sigaar uga dhacay halka loo yaqaano Dharaqa ee duleedka Baladweyne.
Inta la xaqiijiyay laba ruux oo kamid ahaa dadkii saarnaa gaariga ayaa ku dhaawacmay shilkaas, isla markaana waxaa la geeyay Xarun Caafimaad, waxaana gurmad u sameeyay dad shacab ah oo goobta Agdhawaa.
Darawalka ayaa la tilmaamay in gaarigaas uu ku waday si xawaare sare ah, uuna mar qura rogmaday, iyadoo ay saarnaayeen dad shacab ah oo ku wajahnaa deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan, iyadoona uu burbur xoogan soo gaaray gaariga.
Ma’ ahan markii ugu horreeyay oo shil gaari noocaan oo kale uu ka dhaco halka loo yaqaano Dharaqa ee duleedka Magaalada Baladweyne, waxaana xusid in horey shilal gaari halkaas uga dhaceen, kuwaasi oo qaarkood dad ay ku dhinten.